Sawiro: mudaharaad looga soo horjeedo Al-shabaab oo ka dhacay Garoowe. – Radio Daljir
Febraayo 24, 2013 11:45 b 0
Banaanbax balaaran oo ay ka qaybgaleen madaxda sare ee maamulka Puntland,culumaa?udiinka,salaadiinta ?iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay barxada wayn ee magaalada Garoowe.
Isku soo baxaan ayaa waxaa ka qaybgalay madaxda ugu saraysa Puntland culimaa’udiinka Salaadiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana la fasaxay xafiisyada Dawladda, goobaha waxbarashada iyo suuqyada ?ganacsiga ?ee magaalada si loo xoojiyo isku soo baxaan.
Madaxwaynaha Puntland Dr Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) oo la hadalayey kumanaan dadwayne ah oo iskugu yimid barxada wayn ee magaalada Garoowe ayaa ku baaqay in daggaal midaysan lala galo ururka Al shabaab.
Waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland in ay ka qaybqaataan dagaalka lagula jiro ururka Al shabaab oo aan cidna dhaafayn,sidaasi waxaa yiri madaxwaynaha Puntland Dr Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) oo la hadlayey bannaan-baxayaasha.
Dhinaca kale Madaxwaynaha Puntland ayaa waxaa uu balan qaaday in abbaal marin ay Dawladdu siindoonto ?qofkii ka qaybqaata soo qabashada danbiilayaasha ay dawladdu ku raad joogto.
Bannaan-baxaan oo ahaa midkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca magaalada Garoowe inta la xasuusto ayaa waxaa loogu magacdaray bannaan-bixii carada waxaana ay dhamaan dadkii ka qaybgalay si wayn u canbaareeyeen dilkii Alle ha u naxariistee sheikh C/qaadir Nuur Faarax oo bartamihii bishaan Feb,2013 lagu diley magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.